Chrissy Teigen Luna ရဲ့ 5th Birthday ကျင်းပ - သတင်း
Femina ပါဝါအမှတ်တံဆိပ် အလုပ်အကိုင်များနှင့်ငွေကြေး သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု ဖက်ရှင်သတင်း မင်္ဂလာဆောင်အလှအပ Celeb စတိုင် အပြင်အဆင် ခေတ်ရေစီးကြောင်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ လိင်ကိုချစ်တယ်
Chrissy Teigen သည် Luna ၏မွေးနေ့အတွက်မိသားစုပုံများတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောပုံများကိုဝေမျှသည် - 'အမှန်တကယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့နှစ် ၅ နှစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်'
Chrissy Teigen နှင့် ဂျွန်ဒဏ္Legာရီရဲ့ သမီးရုံအဓိကမှတ်တိုင်နှိပ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Luna Simone သည်ငါးနှစ်အရွယ်ရောက်သည်။ အချိန်ဟာဘယ်လောက်မြန်မြန်ကုန်သွားပြီဆိုတာကိုတော့မယုံနိုင်ဘူး။
ထိုကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၃၅ နှစ်အရွယ်မော်ဒယ်လ်သည်သူမ၏ပထမဆုံးသောဖွားမြင်ခြင်းကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဂုဏ်တင်ခဲ့သည်။ သူမသည်, ငါသည်သင်တို့ကိုယနေ့5ဖြစ်ကြောင်းမယုံငါ၏လှပသော, ကြင်နာ, ရယ်စရာ, စမတ်, မယုံနိုင်စရာကလေးမလေးမှရေးသားခဲ့သည် !!! အမှန်တကယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ၅ နှစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်သမီး။ လည်းငါ့ကိုမှကျားကန်နှင့်သင်ကြိုဆိုပါတယ် !!!! Luna တွင်အဖြူရောင် ၀ တ်စုံနှင့်ရောင်စုံလည်ဆွဲတပ်ထားသော Luna ၏ချိုသာသောပုံရိပ်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။
chrissy teigen (@chrissyteigen) မျှဝေတဲ့ပို့စ်တစ်ခု
ကျနော်တို့သေချာမသိသောနေစဉ်, မိသားစုအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းပုံရိပ်တွေခဲ့ကြသည်တူသောပုံရသည်။ The cookbook စာရေးသူ Legend အဖြစ်စုံတွဲရဲ့သား Miles featuring, ထိုနေ့ကနေပိုပြီး SNAP နှင့်အတူမူရင်း post ကိုတက်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ အောက်ပါဒုတိယရေးသားချက်နှစ်ခုကိုကြည့်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, Legend မှတ်ဉာဏ်လမ်းသွားဆင်းခရီးစဉ်ကိုယူပြီးအားဖြင့်၎င်းတို့၏ငယ်ရွယ်သောသမီးထံသို့မိမိအမက်ဆေ့ခ်ျကိုတင်ခဲ့သည်။ All of Me အဆိုတော်သည် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေးများ၏ဓါတ်ပုံများကိုနှစ်များတစ်လျှောက်မျှဝေခဲ့သည်။ ၄၊ ၃၊ ၂၊ ၁ ရှိ Luna သည်သူသည်ဆလိုက်ရှိုးဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။
John Legend (@johnlegend) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ပရိသတ်များ၊ နောက်လိုက်များနှင့်မိသားစု ၀ င်များသည်မွေးနေ့မိန်းကလေးအားသူတို့၏ဆန္ဒများကိုပေးပို့သည့်ပို့စ်နှစ်ခုစလုံးရှိမှတ်ချက်များအပိုင်းကိုအလျင်အမြန်ဖြည့်စွက်ခဲ့ကြသည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး က CUTIE LUNA သို့အလှအပနှင့်ပျော်ရွှင်မှုမွေးဖွားခြင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့, Luna Simone!
ချိုးဖောက်တဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာလက်ရာတိုင်းကိုစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်နေပါ ဒီမှာ ။
RELATED: Chrissy Teigen ကကိုယ်ဝန်ဆောင်သတင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစေသည့်မိခင်ဘဝအကြောင်းကိုကိုးကားသည်
Chrissy Teigen ကိုဝယ်ပါ''အကြိုက်ဆုံးများ -
ဒေါ်လာ ၁၈ အခုဝယ်ပါ
$ 239 အခုဝယ်ပါ
ဒေါ်လာ ၇၀ အခုဝယ်ပါ
ဒေါ်လာ ၂၂ အခုဝယ်ပါ
Categories အောင်မြင်သူ အလုပ်အကိုင်များနှင့်ငွေကြေး Celeb စတိုင်